RAVELONANOSY MAMITIANA : MAY VOLOTRATRA RAJOELINA – MyDago.com aime Madagascar
May volo-tratra Rajoelina hoy ny Ct Ravelonanosy Mamitiana androany teny amin’ny Magro Behoririka ka mikorapaka atsy sy aroa. Na izany na tsy izany hoy izy isika eto amin’ny Magro dia arahabaina tratry ny taona. Isaorana Andriamanitra sy ny filoha Ravalomanana Marc raha nangina tao anatin’ny andro lava kanefa nampahery antsika izy omaly. Ny fifampitokisana hoy izy no fototry ny tolona. Isika matoky azy ary izy matoky antsika. Noho izany dia tokony asehontsika ny fahatokisana ny filoha Ravalomanana Marc. Amin’ny 09 janoary hoy Mamitiana ny fifampiarahabana eny Iavoloha, mialoha io dia hitantsika ny fivezivezena ataon-dRajoelina hoe lasa any Israely. Ohatry ny mitady famonjena satria ny ao anatin’ny ekipany aza efa mizara roa. Ny sasany milaza fa mirotsaha ary ny hafa milaza fa tsy tokony hilatsaka. Ny Sadc koa milaza fa tsy tokony hilatsaka izy, ny frantsay efa nilaza fa mbola zaza ary izao izy lasa nitodika any amin’ireo manana basy. Izay hoy Mamitiana no nahatonga ilay mpikabary milaza fa tokony hilatsaka Rajoelina. Raha Tamin’ity fitondrana tetezamita ity no nisy Malagasy 109 nahazo sazy. Eto amin’ny fifidianana hoy ity mpanao politika ity no hanala fady ny Malagasy , hanala ny tsy mendrika teto. Isaorana ny FFKM , ary enga anie hipetraka ho ray amandreny izy ireo ary hatanteraka ny fampihavanana ireo mpanao politika ho tena iray. Mino isika hoy izy fa tena fampihavanana ny Malagasy tahaka ny fampihavanana nataon’I Kristy no ataon’izy ireo. Angatahantsika amin’ny Sadc hoy Mamitiana averina eto ny filoha Ravalomanana Marc ary misy ny fampihavanana. Ahoana hoy izy no hisian’ny fampihavanana kanefa ny olona hampihavanina aza any an-dafy. Enga anei ka tsy ho dilan’ity taona ity ny fodian’I Dada. Dradradradraintsika hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ity fa mbola tsy nivoaka ny gadra politika ary amin’izay rehefa tonga eto ny avy any am-pita dia avelao hifamela amin’izay satria misy olona tokony hifamela eto. Hatramin’izao hoy izy misy ny fampiantsoana etsy sy eroa nefa tsy nosokafana ny radio nakatona. Misy ny feo fa andeha mitokana ny sasany rehefa tsy hirotsaka ny filoha Ravalomanana Marc. Tena famonoana ny vahoaka ny fandehanana tokana hoy Mamitiana satria efa nisy roa taona teo nandeha ila ny fat fa tsy nahazo fankatoavana iraisam-pirenena. Araka ny tenin’I Dada dia mazava fa tokony hapetraka ny fifampitokisana eo aminy sy isika. Ny antenaintsika hoy izy amin’izao fotoana izao dia efa niaiky ny Sadc fa efa vaha olana eto ny famerenana ny filoha Ravalomanana Marc ka tsy maintsy tanterahina. Noho izany hoy Mamitiana dia manao antso amin’ny Sadc isika fa ny filoha Ravalomanana Marc efa nandray fanapahan-kevitra ka sahia ianareo mandray fanapahankevitra amin’ny fampodiana azy. Raha ilay fehinkevitra tany Dar Es Salam hoy izy dia fanapahankevitra iombonana ny fampodiana an’i Dada ka raha misy mitsivalana amin’izany dia ampiharo aminy ny sazy fa tsy fanagiazana ny kaontiny ihany. Nanafatra ny mpitolona ihany koa ny tenany mba hanao radio trottoir amin’ny fampitana ny vaovao sy ny fanomanana dieny izao ny fitsenana an’i Dada.
Auteur Solo Razafy*Publié le 3 janvier 2013 Catégories Politique
8 réflexions sur « RAVELONANOSY MAMITIANA : MAY VOLOTRATRA RAJOELINA »
izay manana programa ihany no mandeha mitady ny mahasoa ny vahoaka fa tsy lany andro @kabary tsy hinanankanina sy fitanianandro e!any aminy lay fahefana
SAO DIA MBA MIVADIKA BIBY ITY FITONDRANAREO RESAKA ITY RY INGAHY CT A ,,,,?????
-Fa angaha mbola tsy fantatrareo Mpitarika fa efa ela ny vahoaka no mivonona sy miandry an’ i Dada ???
– Izaho aloha dia tsy hivadi-belirano koa fa homba an’i Dada hatrany.
– Aza fenoina fampanantenana isan’andro toy izao, fa avelao HO TONGA MARINA ILAY ANDRO vao manao be kabary, satria na izaho aza mila ho leo !!!
Amin’ny farany tsy hisy olona hino intsony hoe tena marina fa ho avy i Dada vao mivandrehaka eo.
rafanantenana dit :
tokony avela hody amin’izay ireo olona ao Magro fa mampalahelo. Ny mpikabary toa ireo CT ange ka mahazo tombontsoa foana na tonga i Dada na tsy tonga i Dada eh. Fa ireo vahoaka eo Magro kosa tokony mba hiala sasatra kely izy ireo aloha fa rehefa tonga ny andro ilana azy, ho avy foana izy fa lasa tohatra fiakarana fotsiny izy ireo nefa tokony farafaharatsiny omena vola fa sady main’ny andro no vizana no toa voa mafy omena fanantenana lava izao nefa i Dada mety tsy ho avy haingana akory. Misaotra tompoko, aleo izy ireo hody amin’izay fa tsy asaina MIANDRY VASOKA fotsiny eo,
TSIRINALA dit :
4 janvier 2013 à 6 h 19 min
Raha mety ry be kabary sy manao fampanantenana poakaty iasany de mba omeo conge annuel
reo @magro reo fa mampalaelo e hoavy dada efa 3 taona ange zay e marina e sao anody n mahazo ireo vaviantitra reo r zalahy a
4 janvier 2013 à 9 h 02 min
rehefa may ny volotratrany de andao ampiana lasantsy hirehatra hatramin’ny volon….tairo aminizay fa ela loatra mijaly ny vahoaka e
MATOA IREO OLONA EO AMIN’NY MAGRO MBOLA BETSAKA – DIA TIAN-DRIZAREO NO NO MBA MIFANKAHERY ENY IZY – TSY HITAKO IZAY MAHARATSY AN’IZANY – ALEO NY OLONA HANAO IZAY TIANY FA IANAREO MITAZANA AZY NO RERAKA AMBONY IHANY – TSY MAINTSY MISY VOKANY IO NA TIANA NA TSY TIANA – HOHITANTSIKA REHETRA EO ANIE E !
KA TSIS ANALANAZ REO OLN REO ,HILOKANA HISOTRONA TOAKA HIFONA RONGONY SNS, D MIHENO ANGANO TS FAHITA EO , MTANITANINANDRO KELY EOE , MIHENO LAINGA D AVY EO ZAO OUNY D ZAO OUNY MBOLA HONO @ IOA KIIIIII , HOAVYÉ @ ZAOÉ ,KELY SISÉ , DATY SISÉ SNS ,,,,, EFIO NENAREO D ERETO FA DADA TS MAINTS WAV É !!!!!
Précédent Article précédent : Filoha RAVALOMANANA MARC : TSY HIVADI-BELIRANO AMIN’NY VAHOAKA MIHITSY AHO
Suivant Article suivant : Andry Rajoelina : nangatam-pamelana tamin’ny ratsy vitany tany Israel